DAAAWO VIDEO:Itoobiya Oo Adis Sababa Ku Kulminaysa Puntland Iyo Soomaliland(VIDEO) – Marqaanmedia24.com
January 16, 2018 maqal iyo muuqaal, wararka 19
Xili Uu Dhawaan dagaalo Soomaliland Iyo Puntland Ku Dhex marayaan Gobolka Sool walina Taagan tahay Xiisada Dagaalka Iyo hanjbadaha Ciidamada Halkaasi lagu dal dalayo,waxaa Gaadhey Adis Sababa Madaxweynaha Maamulka Soomaliland Muuse Biixi cabdi.
Ujeedada Safarkani Ayaa la Sheegay Inay Itoobiya Kala Hadlayso Xiisada Dagaalka Puntland Iyo Soomaliland Xili In badani lagu Tuhmo inay Itoobiya Tahay Masuuliyada U kala Dabqaada Puntland Iyo Soomaliland Xili markasta Oo dagaal Dhaco Madaxda Labada Dhinac halkaasi tagaan.
Ilo Lagu kalsoon yahay Ayaa Sheegaya Inay Itoobiya Sidoo kale U yeedhayso Madaxweynaha Puntland Oo Maalmaha Soo socda tagaya Adis Sababa Si uu Ula Kulmo madaxda Dowlada Itoobiya.
Inkasta oo Itoobiya Markasta U Yeedho Madaxda Labada Dhinac hadana Toos Layskuma Hor fadhisiyo madama Indhaha Bulshada Qabanayana Hadii toos Laysku Hor fadhisiyo lakiin Go’aamada Xiisadaha Waxay Itoobiya U kala Go’aamisaa Labada Dhinac.
Safarkani Muuse Biixi cabdi Oo Aana horay Loo sii Shaacin Hadana Waxa La Sheegaya Ujeedada Ugu Weyn Inay Tahay Xiisada Puntland Iyo Soomaliland.
Halkani Riix Video Itoobiya
Somaliland oo Xabsiga dhigtay Wariyaal baahiyay Tartan Kubadda cagta oo loogu magac daray Farmaajo
Puntland iyo Somaliland waa kaaf iyo kala dheeri marka runta sida ay tahay loo caddeeyo. Daaroodka iyo Isaaqu abidkood ka ma aanay sinnayn dareenka waddanimo iyo u damaqa diirka soomaalinimo.
Labadani bulsho gaalada iyo dhaxalkooda kufriga ah isku dareen iyo fikir toona kama leh ee waa ay u kala hoggaansan yihiin.
Waxaa lagu kala garanayaa kuwa xuduudo ay gaalo qarni hortii ummad muslim ah ee haddana is ah ka dhex xarriqday weli ugu hoggaansan si aanay diinta Islaamka ee ay sheegtaan iyo wax ku dhaw toona xataa ugu hoggaansanayn ee naftooda u huraya oo deeto “mujaahiddiin” ku sheeganaya.
Eebbow iimaanka iyo khaatumada wanaagsan na solansii oo aynaan gaalo xun u hoggaansamin.
“WA QUL JAA’AL XAQQU WA ZAHAQAL BAADHILU, INNAL BAADHILA KAANA ZAHUUQAA”.
Waxaan ogahay kuwo Daarood ah oo dhulka Soomaalida degto ee Ethiopia ugu yeeraan magaca uu Gaal u bixiyaay oo ah Ogadenia.
Markaad weydiisid maxaad magacaas dhulkaas ugu yeereysa xitaa Ethiopa oo gumeysato waxeey ugu yeertaa dhulka Soomaalid ee Ethiopia.
Waxeey ku leeyahiin dhulkaan magacaas ayaa loo yaqaan adduunka waxaana bixiyay Richard Burton oo Ingriis dadkaasna sidaas dhahaayo waa Daarood.
Dhulka ad sheegtay waxaa la yiraahdaa dhulka soomaalid galbeed.Ogadeena waa beesha u badan soomaalida ardigaas degta.Ogaadeen gaar uma leh dhulkaas oo soomaali badan wada degta.
Tan kale adiguba soo adiga haddeer leh ma aha anigaa gaar u leh magaalo madaxda soomaaliweeyn xamar?Saas darteed soo qalad kuuma aha in aad la yaabtid magaca Ogaadeenya?
Dhanka wadaninimada ad sheegtid soo beeshaada ma aha kuwa soomaali oo dhan xasuuqay oo dhacay oo mooro duugay oo wali ku sii indho adag in ay sii suubiyaan waxay horay u suubiyeen?Waryaa mar dambe ha ka hadlin soomaalinimo iyo wadaninimo midna.
Waqtigii Sayid Maxamed Cabdulle Xassan uu la diriraayey gumeystah Ingriiska ee dalka soo galay, waxaa jirtay dad Soomaaliyeed oo la saftay gaalada.
Sidaad ogtahay Sayidka waa shaqsi u dhashay Daarood waqtigaasna waxaa jiray maamulo la magac baxay Saldanad laba waxeey ahayeen Daarood labadaba waxeey la jireen Gaalada waxeey ka horyimaadeen halgankii Sayidka.
Hal Saldanad waxeey aheeyd Maqiir oo adeerkaa Maxamuud Cali Shire hogaaminaayey uu jaajuus u ahaa Ingriiska.
Midda kale waxeey ahayd Saldanadda Majeerteen ayadana la jirtay gaalada .
Marka waxaan garan la’ahay Daaroodka waddanimada aad ku sheegeysid meesha aad ka keentay.
OGADENIA: waa magac dalkaas, wax dhib ahna malahan waayo, waa magaca caalamka looga yaqaan…Teeda kale haddii nin Tuug ah Go’ kaa xado, oo aad Saldhigga Police ka Tagtid, ma waxaad oranaysaa ninkan Shaati buu iga xaday??!! Magaca uu dhulkan ku maqan yahay Map ka adduunka waxaa ugu qoran “Ogadenia”, cidna uma taqaan Somalida Ethiopia oo aanan garanayn macnaheedaba, ama Soomaali Galbeed….
Maadaama aad tahay shaqsi lagu tilmaamo mutacalim oo haddana dadka meeshaan kuugu yeeraan aqoonyahan waxeey aheed in maanta ka yaq yaqsootid labo nin Soomaaliyeed oo qilaafka dhex yaalo inteey xalin lahayeen looga yeeraayo Addis Abeeba aad walibo mid qabiilkiisa la safatay oo waliba adiga isku qabiil tahiin.
Waa dhibaatada Soomaaliya ku habsatay.
War soomaali oo isku mid ah adigaa kala cayriyey oo laayey oo xasuuqay oo dhacay oo ad kufsateen in taad kufsan karteen.Waryaa see baad u hadlaysaa.Kan hadda diidan soomaalinimada soo adiga ma aha?Soo adiga ma aha kan maanta xasuuqaya shacabkiisa markii ad soomaalidii kale qaar laysay qaarna kaaga carareen xamar.War heedhee see wax kaa yahiin?Maba aha in aad ka hadashid soomaalininimo iyo wax la mida next 100 hundred years.Waayo waad istaqaan kaad tahay.Anigu adiga waxaan kuu aqaan ama kuugu yeeraa WARAABE DADOOW.Waraabahaa kaa fiican.Sababtoo ah waraabuhu intuu ARIGA cunuu ka tagaa oo MA KUFSADO.Markii xamar la idiin ka tagay baad shacabkiinii bishiiba 100 qalataan markaasaad afku ku haysaa dad shacabkooda dhaqaaleeya oo si joogto ah u xanaaneeya.Waaaba yaab in aad isu haysatid in aad tahay qof caadi ah.War Cismaan Cawad kuma yaqaan.Anigaase ku isir aqaan oo kuu soo galaya Goofkaad gashidba.
Fadhi-ku-dirir-dhab ha moodin.
Walaahi waad asiibtay. Afkaaga Caano Lagu qabay. Bartay baruurtu ka qudhunsaneyd ayaad farta si fiican ugu fiiqday.
Allaa ya cisak.
Hurdada katoosa oo kagudba qabyaaladda iyo ururada wadaad xumayaasha,adisababa iyo itoobiya Farmaajo iyo Ismaaciilka Jabuutiba waa ay tagaane waa maxay farqiga udhexeeya tegitaanka Ismaaciil iyo Farmaajo, iyo tegitaanka Muuse iyo Cabdiweli tageen ITOOBIYA.
Adigu soo adigii yiri ma aha anigu soomaali ma ihi?Maxaa kaa quseeya Ali Muxammad iyo aniga waxaan ku wada hadalno?Ali iyo anigu isku meel baan wax u wada wadnaa ee ka bax dhexdanada.Amxaaro baan nahay baad tiraahdeen.Ahaada haddii ad rabtaan.Laakiin ha soo faro galinina arimahanaga noo gaarkaa.Ali iyo anigu midkayana ma diidana soomaalinimada.Iskadaa in aan diidnee waaba ku faanaa soomalinimada.Adigu Marti baad noo tahay,anaguna shaxaadka waan kuu ogolnahay ee maqsinka qayilaada sii joog.
Isqor.com kkkk Adiga yaa kula hadlayayba.
Jaalle waxaad tiri baan kaaga soo jawaabay oo wax kale ma sheegin.Haddii ad saas tahay ka adkoow afkaaga.Waa runtay ee adeerkaa Faysal Cali Xassan miyaan marar badan ku soo cel-celin anagu Itoobiyaan ban nahay.Dee ahaada haddii ay dani idiinku jirto.Who cares.
Atoore sidan miyaad ku fayowdahay?
Hadaba adigu si wanaagsan oo farshaxanimo leh ayaad u abaartaye anigu aan si qayaxan u idhaahdo.
Cismaan waa nin war bartay oo aqoon leh. Waxa laga garankaraa qoraalkiisa oo qudha. Fikrada iyo qoraalkuna waa kala labo. Aqoonta iyo Caqligana sida loo isticmaalo ayay ku xidhan tahay.
Hadaba halka ay sarta Cismaan ka qudhunsantahay waa waxa madax maray wax la yidhaahdo Daaroodi’sm. Daarooku isaga qabiil Hawiye iyo Isaaq la siman wuu la dhaafay. Waxa uu u yahay Qowmiyad dhan. Hada waa sida ay Soomaalidu ama Oromadu Qowmiyado u yihiin oo kale. Kolkaas isaga buugiisa Daarood iyo Soomaali inteeda kale ayaa is le’eg. kkkk Waar halkaas ayay waalidu la maraysaa.
Ninba meeshii buktaa isaga ayay balbashaaye, waxa darakaas dheer iyo qar iska xoornimadaas gaadhsiiyay waa, isaga oo diidan xaqiiqo ku gadaaman oo sidii laydha kolba dhan ay dabayshu ka socoto kaasoo abaarta. Had iyo jeer sanka ka marmarta, hor socota, dhawaaqeeda maqlo. Waa xaqiiqo ku gadaaman. Taas oo la yidhaahdo SOMALILAND. Weligaa ma aragtay jaranjaraadaan dhamaanba. Hadaba Cismaan tii ayuu saaran yahay. kkkkkk Somaliland ka carar, ka carar, ka carara, ka carar, hiiih, hiiiih, hiiih, waan daalay, xaga danbe eeg mise waaba tii oo ku daba taagan. kkkk Hadana orod. kkkk Waxa ka dhaadhici la, waxaad ka mid tahay meel la yidhaahdo Somaliland.
Hadaba marka aad aragto isaga oo Isaaqa Gaalo ku sheegaya, kaaga darane isaga oo daliishanaya magaca iyo weedhii Illaahay hala yaabin. Waa miskiin xaajadu ku murgacantahaye. Gaalnimo ka yeedhsiintani waa jaranjaradii oo qardoofeyna lagu daray. kkkkkk
Hadaba aniguna aan kaftan ahaan ugu danbaabo isaga iyo rag kale oo badan oon socaial mediaha ka buuxa oo Daarood ahe, mar mar baan is idhaahdaa dadkani malaha haday karayaan dhanka Sheekii Daarood ku aasan yahay ayay u tukan lahaayeen. kkkkkkk Waxay in yar u jiraan inay sidii Shiicada oo kale inay dhagaxaan yaryar qabrigii Sheekh Daarood kusoo sawiraan marka ay tukanayaan fooda saara. Waxani illeyn waali ka case. kkkkkkkkk
Kolkii hore, Iidoor waa qudhun iyo horgale iyo waa la soo kiraystaa iyo caybay maraysay. Imika waxa ay xaajadu maraysaa waa gaalo. kkkkkkkk
Ninkan cismaan ah waa nin aad u qiimo badan lakiin waxaa ka tan Bata qadiyada daar’oodizimka waan shaqsiga ugu nadiifka waanan ogahay in aad leedihiin hal yeeyo,
Dhanka kale hadana qabiil somaliyeed oo Mar walba GAALADA la socdaahi in uu yahay daar’ood yahay lakiin ma garanayo arinka uu Mar walba u badheedho,tariiqda lafoole waxaa aay ku baxday dagaalkii talyaaniga iyo biyomaal waxaa GAALADA la socday oo hogaaminayay daar’oodk ninkii ugu horeeyay ee gedo GAALADA la socday wuxuu ahaa daar’ood , xiligii wadanka oo nabad ah ninkii ugu horeeyay ee soo galiya ithopi wuxuu ahaa daar’ood,waa tii layiri imisa ayaa kaa dhimatay dhanka somalidana waa imisa markii uu sheegayna waxaa loogu yiri isku wada dar ilaayn waa wada somaliye,tii ugu dambaaysaynay waa la wada ogaa waxaa hogaaminayayna waa daar’ood,marka cismaanow ma garan karo taariiqda Intaa muuqata sida aad u dafirikarto kuma lihi qabaailda somaliyeed waa uu wada fiicanyahay, lakiin hogaan cadaw ama gaalo loo shaqeeyo waxaa ugu horeeyo no 1ka ah waa reer tolkaa, HANA KA AAMUSIN FEKERKAAGU WAA MUHIIM IN AAD NALA WADAAGTO,CISMAAN TARIIQDA WAA DHAXAL HADII AAY SOMALIDU WAXABA AAYSAN QORIN WAA SOOYAAAL LA KALA DHAXLO EE LA SOCO
Waryaa waa adiga kan ay gaalo u soo xeroootay oo ay ugu jiraan xeryaha xamar.25 kun oo gaalo Madow u badan baad xamar keensatay ee soo adigu gaalo raac ma tihid?
Maxay kuu qabtaan 25 thousand nin oo gaalo ah?Ma Qoor ahaan baad u keensateen maadaama ad rag badan iska disheen illaa wax kale idiin ma qabtaane?Miskiin yahoow dhulka Cismaan Cawad hal askari oo gal ah ma joogo.Adigana xaafadahay kuu joogaan.Waa idinka yiraahda gabdho yar-yar bay gaaladu Bacihii ka jeexeen.War waxba garan mayside qof yahoow liitaa ee adigu marka hore is xisaabi oo dib isu fiiri.Ardiga Cismaan Cawad meel ay gaalo ka joogto sheeg? Ma sheegi kartid illaa maba jiraane.Gaal adiguu galeey quruntay kuu daadiyaa oo gacmaha u hoorsada.Anagu gaalna wax kama barino ugamana baahnin.War MIYAADAN MAQAL REER PUNTLAAN HA ISKU TASHADEEN?
Kkkkk atariisho dhiga ayaa ku kacay,waa ma gudbe yahaw,war meesha aan ka hadlaayno TUKARAQ ma ahan bowe, ee waa taariiq hore waa xiligii aad gumaaytaha fardaha u ahaaydeen oo uu idin dulaaytay boowe,oo marba aad reer u rufiyaani jirteen bowe waa xiligaa oo hada amahan bowe, duliyahaw,